အချိုးအစား လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အကိတ်ကိုယ်လုံးလေးကို အပီအပြင်လှုပ်ခါ ဆော့ကစားပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ TIK TOK လေး – Online News Post
အချိုးအစား လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အကိတ်ကိုယ်လုံးလေးကို အပီအပြင်လှုပ်ခါ ဆော့ကစားပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ TIK TOK လေး
ပုံလေးတွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက် ထား တဲ့ ပုံလေး ကို ” ပါးကွက် လေးပါ ပျက်သွား တဲ့ထိ တရှိုက် မက်မက် နမ်းမယ့် သူ ??” caption လေး တဲ့ တင်ပေး လာတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။မာ်ဒယ် မျက်ဝန်း ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် တယ် နော်..။
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြ မယ် ထင် ပါတယ် နော်..။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပင်မဲ့ ပရိသတ် အများ အပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါ တယ်..။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိ ထားတာ ပါ..။
သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေ ပန်းစား လူကြိုက်များ ကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ ရပါ တယ်…။
ပုံေလးေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ ကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ် ရိုက္ ထား တဲ့ ပုံေလး ကို ” ပါးကြက္ ေလးပါ ပ်က္သြား တဲ့ထိ တရွိုက္ မက္မက္ နမ္းမယ့္ သူ ??” caption ေလး တဲ့ တင္ေပး လာတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။မာ္ဒယ္ မ်က္ဝန္း ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ တယ္ ေနာ္..။
ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ကို သိၾက မယ္ ထင္ ပါတယ္ ေနာ္..။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာက ကို ဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ပင္မဲ့ ပရိသတ္ အမ်ား အျပားရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈ ရရွိ ထားတာ ပါ..။
သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရ ပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ား ကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾကတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာေတြ႕ ရပါ တယ္…။
Previous post ဖွေးဥနုထွတ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးရဲ့ အတွင်းသားအလှလေးတွေကို အကြမ်းစား ချပြလိုက်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ ပုံလေးများ
Next post အမိုက်စားအလှတရားတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် အမြင်ဆန်းနေတဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ စပယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေးများ